Behance fanavaozana ho Material Design amin'ny Android | Famoronana an-tserasera
Design Material no endrika lamina apetrak'i Google tamin'ny taon-dasa ka ny ankamaroan'ny fampiharana sy ny interface Android dia nandeha tamin'ireto andalana ireto izay nahavita namorona anarana iraisana mba hahafahan'ny mpampiasa mahita ny fahatsapana tsara indrindra rehefa mizaha ny fampiharana tiany indrindra.
Ankehitriny dia i Behance izay novaina tamin'ny kinova 3.0 ho an'ny Design Material hitondrana, raha fintinina, fampiharana tsara kokoa hiditra amin'ny endri-javatra rehetra amin'ity sehatra malaza ity. Sarimiaina, fanitsiana vaovao isaky ny zoro ary sokajy vaovao no endri-javatra manaitra indrindra amin'ny fanavaozana izay azo alaina ankehitriny.
Raha efa manana kalitao tsara ny fampiharana Android teo aloha, ankehitriny peta-kofehy azy amin'ity Material Design ity izay mametraka ny famaranana amin'ny lafiny maro toy ny fanatsarana ny fampisehoana, efijery lehibe ahafahana mahita asa marobe satria voalamina tsara kokoa ny habaka ary sokajy "vakansy" vaovao ahafahanao mahita asa angatahan'ny orinasa na studio / famoronana zavakanto.
Nangataka i Behance pirinty ny tombo-kase kalitao Ao amin'ity kinova vaovao ity, 3.0, misy singa Material Design sasany toy ny bokotra FAB izay mamela, rehefa miasa amina tetikasa iray, handefa hevitra haingana, na dia mijery ireo sary samihafa momba ny famoronana aza isika.
Izy io koa dia manana fanampin-javatra kely hafa toa ny fanohanana ny alalana Marshmallow ary ny fikarohana tsaratsara kokoa amin'ny heviny fa ny fanamafisana dia apetraka amin'ny sarin'ilay artista, toy ny tranga misy ny mombamomba azy ireo izay misy ny sarin'izy ireo amin'ny habe lehibe kokoa.
Fanavaozana ilaina sy tadiavina tafapetraka ihany izany tamin'ny farany ka, amin'ny telefaona Android na takelakao, azonao atao ny manararaotra an'io sehatra lehibe io izay hihaonan'ireo karazana mpanakanto rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Behance dia havaozina ao amin'ny kinova Android ho Material Design